लामो समयपछि हिमानिप्रतीको माया यसरी पोखे पारसले….
June 12, 2020 2779
छोरीहरुसंग थाइल्याण्डमा रहेकी पूर्वयुव’राज्ञी हिमानी शाहको टिकटक भिडियोलाई उनका श्रीमान पारस शाह’ले शेयर गरेका छन् । पारसले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा छोरीसँग टिकटकमा रमाउँदै बनाएको भिडियोलाई फेमिली भनेर शेयर गरेका हुन् ।
सर्वसाधारणले जस्तै टिकटकलाइ आफ्नो खुसी साट्ने माध्यम बनाएकी सामाजिक अभियन्ता हिमानी शाह यतिबेला टिक’टक भिडियोबाटै सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको छन् ।
सोमवारमात्र एउटा टिकटक भि’डियो भाइरल भएको पूर्व युवराज्ञी हिमानी शाहको छोरीहरुसंग रमाइलो गरेको अर्को टिकटक भिडियो पनि सार्वजनिक भएको छ । पूर्व राजपरि’वारका यस्ता ब्यक्तिगत भिडियो र तस्बिर विरलै सार्वजनिक हुने भएकाले अपलोड भएको’ केही बेरमै भाइरल हुने गर्छ ।
छोरी र श्रीमतीले थाइल्याण्डमा गरेको रमाइलोको टिकटक भिडियो पूर्व युवराज पारस शाहले पनि शेयर गरेका छन् । फे’मिलि लेखेर उनले शेयर गरेको भिडियोमा पनि थुप्रै कमेन्ट आएका छन् ।
सोमवार अपलोड भएको भिडियो एकै छिनमा भाइरल भएको थियो । मंगलवार विहानै देखि फेरी अर्को टिकट’कको भिडियो सार्वजनिक भएसंगै भाइरल भएको छ । सोम’वार सार्वजनिक भएको सोही भिडियो पूर्वयुवराजले पारसले शेयर गरेका हुन् ।
हिमानीले छोरीद्वय पूर्णिका राज्य लक्ष्मी शाह र कृतिका राज्य लक्ष्मी शाहसँग टिकटककामा अभिनय गरेकी छन् ।छोरीहरुलाई भेट्न थाइल्यान्ड पुगेकी र लकडाउनका कारण अहिले उतै अड्कि’एकी हिमानी छोरीका साथमा रमाइलो गरिरहेकी छन् ।
छोरीहरुका साथ समय विताउन थाइल्याण्ड गएकी हिमानी लकडाउनका कारण उतै छन् भने पूर्व युवरा’ज पारस भने पोखरामा रमाइलो गरिरहेका छन् ।
Prevराजा त्रिभुवनकी छोरी नलिनी राज्यलक्ष्मीको निध’न
Nextमलेसियाबाट नेपाल फर्कने लागि सूचना सार्वजनिक, को परे प्राथमिकतामा? हेर्नुहोस्
पाँडेले खुपीका बा लाई नाइटो भन्दा तल भने पछि सबै हाँसेर मुर्छा परे ( भिडियो सहित)
ऐश्वर्या रायले आमिर खानसँग फिल्ममा किन काम गरिनन् ? यस्तो छ रोचक कारण !